एक मानिस एक फोन बिना मेरो जीवन कल्पना गर्न सक्छ अघि छैन, त्यसपछि आज यो सरल छ भने, पहिले नै उच्च प्रविधी उपकरण व्यक्तिगत कम्प्युटर (छोटो लागि पीसी) छ थियो थियो। घरमा वा काम मा हामी अगाडि देखेर प्रयोग सबै शायद छ एक फ्लिकरिङ मनिटर, अब खुट्टा र र त्यसपछि चुक्छौं एक हल्ला कूलर बोझिल सिस्टम एकाइ। त्यहाँ प्रगति प्रयोगकर्ताहरूको चाहना आशंका, अगाडी उत्प्रेरित गर्छ, समय छ। पहिलो नजर एकदम मात्रा फिर्ता पर्खाल गुमाउने, आकार मा घट्यो। त्यसपछि सिस्टम ब्लक थप संकुचित बनाउन थाले।
र त्यसपछि यो अन्तमा, धेरै क्षण पनि जब, आए डेस्कटप कम्प्युटर एक एकाइ भएको छ, निगरानी एकिकृत। सायद धेरै असामान्य आकार, पनि उन्नत पीसी प्रयोगकर्ताहरूको लागि। तर यसको सार मा एक कैंडी पल्ट के हो? अलग पीसी संग तुलना रूपमा उहाँले शक्ति र प्रदर्शन गुमाए भने? के प्राप्त गर्नुपर्छ - एक साधारण कम्प्युटर, एक कैंडी पल्ट वा ल्यापटप? यी र अन्य मुद्दाहरू, प्रकाश, अन्तमा, सबै गाढा प्राविधिक प्रगति को पक्ष जवाफ प्रयास गरौं।
पहिले, यो भन्ने तथ्यलाई उल्लेख लायक छ कम्प्युटर शक्ति मुख्यतया यसको निर्मित प्रोसेसर (सीपीयू) निर्धारण गरिन्छ। उहाँलाई सामान्य मा सम्पूर्ण प्रविधिको प्रदर्शन निर्भर हुनेछ देखि यो थियो। आधुनिक अवधारणा मा एक कैंडी पल्ट के हो? यसलाई छुट्टै मोडेल हामीलाई लागि सामान्य भन्दा छैन कम शक्तिशाली प्रोसेसर मा आधारित छ कि एक साधारण पीसी बढी संकुचित अनुरूप छ। साँच्चै, आकार एक प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दैन। सीपीयू अन्तिम monoblock नयाँ उत्पादनहरु धेरै कोर र उच्च घडी आवृत्ति घमण्ड। यो सबै केवल व्यक्तिगत कार्यक्रम को कम प्रतिक्रिया पटक को फलस्वरूप, प्रयोगकर्ता को हातमा खेल्छ। यसबाहेक, बहु-कोर प्रोसेसर साथ अनुमति एकदम सजिलै एक पटक थप चलिरहेको प्रक्रियाहरू सञ्चालन। त्यसैले, तपाईंले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छैन "रचनाहरू" भनेर ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ। एक विशाल प्लस - म यो छ कि सहमत हुनुहुन्छ।
यो दृश्य व्यवसायीक पर्छ। र के तिनीहरूले बारेमा औसत साधारण पीसी प्रयोगकर्ता भन्छन् कम्प्युटर-टुक्रा? समीक्षा विशेषज्ञहरु 'अनुमान मात्र गर्न काट्न छैन, तर पनि तिनीहरूलाई वृद्धि गर्न। आखिर, पनि आधुनिक प्रविधि र यसको subtleties बारेमा ज्ञान को धेरै भद्र सेट संग प्रयोगकर्ता तुरुन्तै एक उच्च गति उल्लेख गरे। साथै, monoblock को बाहिरी डिजाइन धेरै केही मानिसहरू यसको चिल्लो फारामहरू र नरम लाइनहरु गर्न indifferent छोड्नुहोस्। छोटो मा, "मात्र mortals" र संकुचित पीसी विकल्प पक्षमा आफ्नो छनौट। आफ्नो आँखा मा एक कैंडी पल्ट के हो? उबाऊ सिस्टम ब्लक बक्से कार्य क्षेत्र मुक्त गर्न मात्र होइन, तर पनि उत्पादकत्व र लगभग सबै कार्यहरु को गुणस्तर सुधार यसरी।
जब एक पीसी छनौट तर किन प्राथमिकता दिन? जो, राम्रो छ एक कैंडी पल्ट वा ल्यापटप? तथ्याङ्क थप र थप उपभोक्ताहरु पहिलो संस्करण चयन भनेर देखाउँछ। यो कुरा कारण ल्यापटप को लोकप्रियता त्यसको गतिशीलता छ भन्ने छ। यो कम्प्युटर पारंपरिक पीसी तुलनामा धेरै सानो आयाम छ, यो जाँदा तपाईं संग लिन सुविधाजनक छ। तर यो मामला मा, जस्तै उपकरणहरू शक्ति एकदम हराउछ। सबै विनिर्देशों जो, पाठ्यक्रम, ती ग्राहकहरु थप शक्तिशाली केहि गर्न चाहने लागि बेफाइदा छ, कम छन्। साथै, चकलेट बार पूर्ण चलचित्र र खेल सञ्चालन हेर्दै लागि पूर्ण छ जो एक ठूलो स्क्रीन, दावा। र नवीनतम मोडेल एक टच स्क्रीन भनेर किबोर्ड र कम्प्युटर माउस खरिद लागत कम गर्न अनुमति दिन्छ संग सुसज्जित छन्।
त्यसैले चकलेट बार के हो संक्षेप गरौं। यो - सबै भन्दा राम्रो विकल्प जसले उत्कृष्ट प्राविधिक विशेषताहरु, एक शक्तिशाली "भराई", एक कम्प्याक्ट अझै स्टाइलिश डिजाइन मूल्यांकन ती लागि। Monoblock - दुवै घर र डेस्कटप प्रयोगको लागि एक उचित समाधान छ।
अर्थहीन Qumo। वायरलेस प्रकार हेडफोन
ASRock H61M-जी एस: कार्यालय कम्प्युटरको लागि आदर्श Motherboard
के सपना गर्न दाँत को हानि बारे सपना? दाँत सपना व्याख्या बाहिर गिर
पछिल्लो वर्ष, ब्रश गुलाब छ। किन अब ब्लूम छैन?
अभिनेत्री Hityaeva Lyudmila: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, चलचित्र
कसरी चिल्लो ग्लेज एक mousse केक तयार गर्न: व्यञ्जनहरु
एनाफरन: प्रयोगको लागि निर्देशनहरू